Baolina kitra Afrikanina Nandresy ny CNaPS Sport, nahatazona sahala ny Fosa Juniors
Foot à 7 sy Foot à 9 eny Antanandrano Lasan’ny Ajax Androhibe sy ny Atm Andrononobe ny 400.000Ar
Nifarana tanteraka tamin’ny fanatontosana an’ireo famaranana roa ny alahady 15 jolay teo, teny amin’ny kianjan’ny 3Fa teny Antanandrano,
Fikambanana Gasy 3MA-FM Nanomboka ny alahady teo ny « Tournoi de vacances »
Natomboka tamin’ny alahady 15 jolay 2018 teo tao amin’ny kianjan’i Mahazina Ambano any Antsirabe ny « Tournoi de vacances » andiany voalohany karakarain’ny fikambanana mpanao asa soa Gasy 3MA-FM tarihin’ny filoha nasionaliny, Randriarimalala Bien Aimé manana ny foibeny ao 67 ha Antananarivo.
Baolina kitra vehivavy Malagasy Mitohy ny fandresena azon’ny Asot sy Askam
Teo amin’ny andro faha-4 amin’ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’ny baolina kitra vehivavy andro faha-4 amin’ny andiany faharoa tontosaina eny amin’ny kianjan’i Carion dia mbola tafavoaka ho mpandresy hatrany ny klioban’ny Asot Analamanga sy Askam Itasy mitarika an’isa vonjimaika hatreto.
Azo ambara fa fahombiazana roa sosona no azon’ireo ekipa Malagasy mandray anjara amin’ny fifaninanana Afrikana ankehitriny.
Nandresy ny Kcca Ougadey 2-1 teo amin’ny kianjany teny Vontovorona tamin’ny sabotsy 10 febroary teo, ny ekipan’ny CNaPS Sport solontenantsika amin’ny fifaninanana “Champion’s League Africain 2018” dingana savaranonando lalao mandroso. Tena niezaka mafy ry Ando sy ny namany ka nahatifiditra ireo baolina roa antom-pandresena (Feno 58’ ary Francis 90’+2) ireo na dia ry zareo Ougandey aza no nitarika an’isa teo amin’ny minitra faha-53 tamin’ny alalan’ny baolina matin’i Derrick. Ady sahala 0-0 dia ampy hahatafita ny CNaPS Sport amin’ny dingana manaraka amin’ny lalao miverina hatao any Kampala Ouganda ny alarobia 21 febroary 2018 izao. Nilaza ny hanome toromarika ny hamonoana baolina an-tanin’olona an’ireo mpilalao anefa ny mpanazatra ny CNaPS Sport, Andriambololona Tipeh.
Nisaraka ady sahala 1-1 tamin’ny Afc Léopard Kenya kosa omaly alahady 11 febroary tao amin’ny kianjan’i Bukhungu Stadium any Kenya. Na dia efa nitarika an’isa 1-0 koa aza ry zareo mpampiantrano dia nosahalain-dRado kely teo amin’ny minitra faha-15. Mbola nisy baolina faha-2 matin-dRado kely koa aza teo amin’ny minitra faha-36 saingy nolavin’ny mpitsara fa hoe “hors-jeux” izany. 0 sy 0 ihany koa amin’ny lalao miverina hotanterahina any Mahajanga amin’ny alarobia 21 febroary dia ampy hahatafita ny Fosa Juniors amin’ny dingana manaraka. Ny mamono baolina anefa no tena azo antoka indrindra.